Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe, ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan shirka maanta ka furmaya Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe, ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan shirka maanta ka furmaya Magaalada Muqdisho
Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe, ayaa si cad u sheegay inay ka soo horjeedaan shirka maanta ka furmaya Magaalada Muqdisho ee looga hadlayo Doorashada Qaran ee dalka Somaliya ka dhaceyso nooca ay noqon doonto.
Madaxweynaha maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo Saxaafadda kula hadlay Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud, ayaa sheegay inaysan waxba ka quseyn shirka maanta ka furmaya Magaalada Muqdisho.
Waxa uu sheegay Sheekh Maxamed Shaakir in aysan jirin wax tixgelin ah oo aan laga siin ka maamul ahaan, islamarkaana wixii soo baxa aanay iyagu qeyb ka ahayn.
Madaxweynaha maamulka Gobolada Dhexe wuxuu tilmaamay inaan lagu kadsoomin shirkaasi ka furmaya magaalada Muqdisho, isaga oo Beesha caalamka ku wargeliyay Maamulka Gobolada Dhexe inaan wax tixgelin ah laga siin shirka.
Saacadaha soo socda ee maanta ayaa lagu wadaa Magaalada Muqdisho in uu ka furmo shirka Madasha Wadatashiga Doorashooyinka Qaran ee looga hadlayo nooca ay noqon doonto doorashada dalka ka dhaceysa sanadka 2016-ka.
Xasan shiikh maxamuud oo ka qeyb galay xaflad lagu soo bandhigayay dariseenta
Waxaa lagu wadaa in uu maanta furmo Shirka Madasha Wadatashiga Doorashooyinka Qaran